Technical Oniversiten'i Munich - Fianarana Engineering tany Alemaina
Technical Oniversiten'i Munich
fanafohezan-teny : Tum
Créé : 1868
Aza adino ny discuss Technical University of Munich
Technical Oniversiten'i Munich dia iray amin'ireo oniversite Eoropa ambony. Efa nanao ny tsara amin'ny fikarohana sy fampianarana, interdisciplinary fanabeazana sy ny mavitrika fampiroboroboana ny mahabe fanantenana tanora mpahay siansa. Ny anjerimanontolo ihany koa ny rohy mahery tafaray kokoa amin'ny orinasa sy ny ara-tsiansa andrim-panjakana manerana izao tontolo izao. Tum dia iray amin'ireo oniversite voalohany tany Alemaina mba hatao hoe ny University of Excellence. Ary, Tum tsy tapaka laharana eo amin'ny tsara indrindra ao amin'ny anjerimanontolo Eoropeana filaharana iraisam-pirenena.
Tonga soa eto amin'ny Technical Oniversiten'i Munich! Ny anjerimanontolo miverina any amin'ny mpamorona taona 1868, ary ny hevitra dia maneho Voaporofo ny manan-danja mandritra ny taona maro: tsara ny fampianarana ao amin'ny siantifika sy ara-teknika fitsipika, tanjaka ny fitaoman'ity sy ny traikefa nahafinaritra ny fikarohana, fambolena na toetra amam-panahy manokana sy ny nizara ny kolontsaina. Anisan'ireo efa nianatra, nampianatra, ary nanao fikarohana eto dia niavaka sarin-ny ara-tantara taloha sy ny ankehitriny: Loka Nobel mpandresy, inventive injeniera, mpandraharaha, mitarika jiro izay namolavola ny fomba fiainantsika. Alumni hita isa, izay nahazo ny fanabeazana amintsika manana, ny alalan 'ny asa, nandroso ny fampandrosoana ny fahalalana ara-fiaraha-monina.
39,081 tanora, 22% isan-jato ny avy any ivelany izay Alemaina, are studying in our 13 akademika departemanta. Izany dia ny fandraisana fepetra fanahy, amin'ny liberaly sy ny fifaninanana maneho hevitra, izay mitondra ny tanjona telo lehibe mila fanampiana izy: manam-pahaizana ara-tsiansa, internationality, ary ny fandraharahana.
Ary inona no nanampy ny oniversite ny dingana ho amin'ny toerana iray nohajaina tamin'ny sehatra izao tontolo izao dia mafy ny fiaraha-monina izay heviny mampiroborobo ny talenta sy ny fampisehoana ary tsy manaiky generational faritra. Porofo hita maso iray ny fianakaviana Tum ny firaisan-kina no fanorenana indray avy amin'ny sisan-javatra rava ny Ady Lehibe izay efa rava ho any 70 isan-jato ny oniversite. Amin'izao fotoana izao dia manana Tum efa-jato mahery ny trano amin'ny ampiasaina eo amin'ny Munich, Garching, ary Freising-Weihenstephan tranokala.
Technical Oniversiten'i Munich mahatakatra tena mba ho mpanompo ny ny fiaraha-monina izay miatrika fanamby vaovao mandrakariva ateraky avy amin'ny fandrosoana ny fanatontoloana. Mitaky fahaizana ara-teknika maro tanora matihanina avy amin'ny fitsipika izay tanjon, amin'ny fomba interdisciplinary, ny olana lehibe tamin'ny taonjato: ny fahasalamana sy ny sakafo; angovo, toetrandro, sy ny tontolo iainana; harena voajanahary; fivezivezena sy ny foto-drafitr'asa; fifandraisana sy vaovao. Efa nandray ireo “taonjato lohahevitra” toy ny manokana, ary izy ireo no mamaritra ny fikarohana tanjona.
Ny rafitra paikady mivoatra ho an'ny alemà Excellence Initiative in 2006 - “Tum. Ny fandraisana fepetra University” - Nanokatra lalana vaovao ho amin'ny lasa sahy fifaninanana iraisam-pirenena amin'ny oniversite ny tsanganany. Ny Tum Graduate School endrika maneho ny miandalana ny voarafitra doctorat fanabeazana. Izany dia manome fahafahana ny mpahay siansa sy ny injeniera tanora mba hampitombo na ny famaizana mombamomba sy midadasika, transdisciplinary faravodilanitra. Ao amin'ny Tum Institute for Advanced Fianarana, tsara talenta mahita famoronana fikarohana azo atao ary koa ny toerana ho an'ny interdisciplinary lahateny. Izahay asa vaovao rafitra, ny Tum Faculty ny Fananan-Track (2012), efa nampiditra ny modelim fiovan'ny rafitra oniversite alemà.
Ireo izay mianatra ao amin'ny Oniversiten'i Munich Technical maro amin'izao fotoana izao ny safidy. Tsy izahay ihany no hanatitra kilasy voalohany-pifehezana fanabeazana, fa koa ny hampiroboroboana ny fiaraha-monina-trano asa mihoatra ny fiainana andavanandro mpianatra. Isika hampahafantatra ny mpianatra ny fikarohana siantifika amin'ny dingana iray tany am-boalohany. Izahay hitari-dalana azy ireo ho foana ny fiezahana hahazo ny vaovao sy ny undiscovered. Isika vola fotoana, angovo, ary loharano ao ny manan-talenta tanora Izay mamboly sy ny fanamby. Tianay mba hahatonga azy ireo, hatrany araka izay azo atao, “weatherproof” izany rehetra izany dia mety ho tojo ny matihanina ho avy.
Ny an-trano pejy dia mikendry ny hampahafantatra anao mazava tsara momba ny Technische Universität München, raha mbola miaraka amin'izay koa, mampita ny fahatsapana ny hoe iza isika amin'ny maha-fiaraha-monina. Tum: izay midika hoe antsika rehetra! Ny varavarana misokatra ho anareo hijoro.
Profesora Wolfgang A. Herrmann
Herinaratra sy ny Computer Engineering
2004 Official opening of Forschungsreaktor München II, a leading neutron source, tamin'ny Martsa 2.
Ianao ve mila discuss Technical University of Munich ? Any fanontaniana, fanehoan-kevitra na hevitra
Photos: Technical Oniversiten'i Munich ofisialy Facebook
University of Münster Muenster